Dowladda Qadar oo waqti dheeraad oo loogu daray inay ku fulliso shuruudaha loo gudbiyay – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Dowladda Qadar oo waqti dheeraad oo loogu daray inay ku fulliso shuruudaha loo gudbiyay
Dowladaha Sucuudi Carabiya, Masar, Isutagga Imaaraadka Carabta iyo Baxreyn ayaa muddo 48 saac ugu kordhiyay waqtigii kama dambeysta ahaa oo ay dowladda Qadar u qabteen, si ay u aqbasho shuruudaha ay u gudbiyeen.
Waqtiga markii hore loo qabtay dowladda Qadar ee ku ekaa maalintii shalay ee Axad ayaa looga dan-lahaa inay ku aqbasho shuruudaha loo gudbiyay.
Shuruudahaas 13-ka ah waxaa ka mid ah in dowladda Qadar ay xirto warbaahinta Al-Jazeera iyo saldhigga militeri ee Turkiga.
Dowladda Qadar waxay sheegtay inay jawaabaheeda rasmiga ah oo waraaq ku qoran ay maalinta Isniinta ah u diri doonto dalka Kuwayt.
Qadar ayaa hore u diiday eedaymaha uga yimid dalalka ay dariska yihiin ee sheegaya inay taageerto argagixisada.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Qadar Sheekh Moxamed Bin C/raxman Bin Jassim Al-Thani ayaa maalinta Isniinta ah u ambabixi doona dalka Kuwayt, si uu u sii qaado waraaqdaas oo ka timid boqorka Qadar kuna sii jeedda boqorka Kuwayt oo ah dhex-dhexaadiyaha ugu wayn ee xiisadda Khaliijka.
Wasiirka ayaa Sabtidii lasoo dhaafay sheegay in dalkiisu uu diiday dalabka loo soo jeediyay balse uu diyaar u yahay wadahadallo shuruudo sax ah wata.
Dowladda Qadar ayay todobaadyo saaran yihiin cunaqabatayno diblamaasiyadeed iyo mid dhaqaale oo aan la sii saadaalinin, kuwaas oo uga yimid Sucuudi Carabiya iyo xulafadiisa dalalka Masar, Isutagga Imaaraadka Carabta iyo Baxreyn.